“३० अन्डर ३०” का नेपाली - विशेष - साप्ताहिक
“३० अन्डर ३०” का नेपाली
धनी तथा प्रभावशालीहरू व्यक्तिको सूची जारी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय म्यागजिन फोब्र्सले उदीयमान युवाहरूको सूचीमा ६ जना नेपाली युवालाई समेटेको छ । सन् २०१८ का लागि फोब्र्सले विभिन्न विधामा जारी गरेको एसियाका ‘३० अन्डर ३०’ उदीयमान युवाको सूचीमा नेपालमा ६ जना युवाले स्थान पाएका हुन् ।
फोब्र्सले जारी गरेको सूचीमा सोसल इन्टरपेनर्स विधामा ५ जना तथा इन्डस्ट्री, म्यानुफ्याक्चर एवं इनर्जी विधाको सूचीमा १ जना नेपाली युवा अटाएका हुन् । नवीनतम सोच र सम्भावना बोकेका युवाहरूलाई समेटेर फोब्र्सले विगत तीन वर्षदेखि ‘३० अन्डर ३०’ को सूची तयार पार्दै आएको छ ।
सन् २०१८ को उक्त सूचीमा सोसल इन्टरप्रेनरसिप क्याटागोरीमा ‘खाली सिसी म्यानेजमेन्टकी संस्थापक आयुषी केसी पनि छिन् । यही क्याटोगोरीमा इकोसेल इन्डस्ट्रीका तीन जना युवा निशान श्रेष्ठ, सचित पण्डित तथा सुवास श्रेष्ठ छन् । यस्तै, अमेरिकामा चर्चामा रहेकी नेपाली चेली कञ्चन अमात्य पनि त्यही क्याटागोरीमा समेटिएकी छिन् । फोब्र्सको ३० अन्डर ३० को सूचीमा परेका अर्का नेपाली हुन्— एन्जल निरौला । उनी इन्डस्ट्री/ म्यानुफ्याक्चर तथा इनर्जी क्याटागोरीको ३० अन्डर ३० को सूचीमा छन् । निरौला घाम पावरका म्यानेजिङ डाइरेक्टर हुन् ।
फोब्र्सले ‘३० अन्डर ३०’ लागि कला, इन्टप्राइज टेक्नोलोजी, फाइनान्स एण्ड भेन्चर क्यापिटल, इन्डस्ट्री/म्यानुफ्याक्चर/इनर्जी, मिडिया/मार्केटिङ/एड्भन्टिजमेन्ट, सेलिब्रेटी, योङ्गेष्ट, विग मनी, रिटेल/इकमर्स, कन्जुमर टेक्नोलोजी, इन्टरटेन्मेन्ट/स्पोट्र्स, हेल्थकेयर/साइन्स, सोसल इन्टरपेनर्सजस्ता विधामा उल्लेखनीय कार्य गर्ने युवाहरूलाई सूचीकृत गरेको हो । तीन वर्षदेखि फोब्र्सले ३० अन्डर ३० को सूची प्रकाशन गर्दै आएको छ । गत वर्ष एसियाका ३० वर्षमुनिका ३० प्रभावशाली युवामा पाँच जना नेपालीले स्थान पाएका थिए ।
को–फाउन्डर, इको सेल इन्डस्ट्रिज
इको सेल इन्डस्ट्रिज आर्थिक, पर्यावरण—अनुकूल भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण सामग्री निर्माण गर्न समर्पित स्टार्टअप कम्पनी हो । सन् २०१५ मा नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएपश्चात् निशान श्रेष्ठ, सचित पण्डित तथा सुवास श्रेष्ठले भवन निर्माणमा छिटो र सस्तो प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरे । उनीहरूले लेगोजस्तो इन्टरलकिङ इँटा प्रयोगमा ल्याए । माटोले बन्ने उक्त इँटामा १० प्रतिशत सिमेन्ट हुन्छ, जसलाई त्यसपछि मेसिनद्वारा एउटा आकार दिइन्छ । इको सेलले मेसिनरी आपूर्ति, निर्माण परामर्श सेवा तथा प्रशिक्षण समेत प्रदान गर्दै आएको छ । यही नवीन सोचका लागि फोब्र्सले इको सेलका, को–फाउन्डरहरूलाई एसियाका ‘३० अन्डर ३०’को सोसल इन्टरपेनर्स क्याटागोरीमा समेटेको हो ।
फाउन्डर, सस्टेनेबल फिस फार्मिङ इनिसिएटिभ (एसएफएफआई)
कञ्चनलाई सस्टेनेबल फिस फार्मिङ इनिसिएटिभ (एसएफएफआई)को फाउन्डरका रूपमा यो सूचीमा समावेश गरिएको छ । कञ्चनको कम्पनीले जलकृषि उत्पादनमार्फत गरिबी निवारण एवं खाद्यान्न असुरक्षा हटाउन काम गर्दै आएको छ । यसका साथै एसएफएफआईले ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूलाई साना उद्यम सुरु गर्न फाइनान्स, टेक्नोलोजी, स्थानीय स्रोतहरूको उपयोग तथा तालिम उपलब्ध गराउदैं आएको छ । अमात्यको कामलाई अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति विल किन्टन, नेपाल सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघले मान्यता दिएको फोब्र्सले जनाएको छ । कञ्चनले महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि युएन वुमन ग्लोबल च्याम्पियनका रूपमा समेत योगदान पुर्‍याउँदै आएकी छिन् ।
संस्थापक, खालीसिसी म्यानेजमेन्ट
आयुषी केसी नेपालमा ‘जिरो वेस्ट गोल’मा काम गरेर विश्वमा परिवर्तन ल्याउने सोचमा छिन् । युएसएडकी पूर्वकर्मचारी केसी जागिर छोडेर सामाजिक उद्यममा लागिन् र उनले खाली सिसी म्यानेजमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडको स्थापना गरिन् । खालीसीसीडटकम १३ हजारभन्दा बढी पुन: प्रयोग गर्ने कवाडी विक्रेता तथा कवाडी सामान क्रेतासँग जोडिएको छ । पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने पदार्थहरूलाई उनले ल्यान्डफिल्ड (फोहोर फाल्ने ठाउँ) बाट केही टाढा राख्न खोजेकी छिन् । केसीले पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने पदार्थहरूप्रति आममानिसको धारणामा परिवर्तन ल्याउन खोजिरहेकी छिन् र त्यसको महत्व बुझाउन लागिपरेकी छिन् । नवीन सोचमार्फत विश्वमा परिवर्तनको सन्देश दिने आयुषीको सकारात्मक पहलका कारण फोब्र्सले सोसल इन्टरपेनर्स क्याटागोरीतर्फ उनलाई दक्षिण एसियाका ‘३० अन्डर ३०’ को सूचीमा राखेको हो ।
म्यानेजिङ डाइरेक्टर, घाम पावर
नेपालका ३० प्रतिशत मानिस अन्धकारमा जीवन गुजरिरहेका छन् । घाम पावरका प्रबन्ध निर्देशक एन्जल निरौला यो समस्या सम्बोधन गर्न क्रियाशील छन् । उनले काम गरिरहेको सोलार माइक्रोग्रिडले विद्युत्को आवश्यकता भएका मानिसहरूलाई विश्वसनीय विद्युत् ऊर्जा प्रदान गरिरहेको छ । निरौलाको निजी कम्पनीले २ दशमलव ५ मेगावाट क्षमताको माइक्रोग्रिडहरू २ हजार परिजोजनामार्फत स्थानीय तहमा जडान गरिसकेको छ । यस्ता माइक्रोग्रिडहरूको जडानले सर्वसाधारणलाई डिजेल र मट्टितेलको प्रयोग कम गर्दै वातावरणमैत्री हुनसमेत प्रेरित गर्छ । निरौला विश्व ऊर्जा काउन्सिलको ‘फ्युचर इनर्जी लिडर्स’ कार्यक्रमका सदस्यसमेत हुन् ।
प्रकाशित :चैत्र २२, २०७४
सेकुवा कथा माघ ९, २०७५
थरी–थरीका सेकुवा माघ ८, २०७५
सेकुवा सेन्सेसन माघ ६, २०७५
कलाकारको न्यू इयर पुस १७, २०७५
यो वर्ष बन्द भएका सेवा पुस १४, २०७५
जनावरहरूको हनिमुन पुस १४, २०७५
कस्तो हुँदैछ क्रिसमस ? पुस ९, २०७५
क्रिसमसको रौनक पुस ९, २०७५
को हुन् सान्ता क्लज ? पुस ८, २०७५
हनिमुनको ग्ल्यामर पुस १, २०७५